﻿ “विकास निर्माणको आधार नै सबैको सक्रिय सहभागिता हो,” : डेगराज
आइतबार १२, असोज २०७६
रामधुनी नगरपालिका पूर्वको विकासोन्मुख नगर हो । धार्मिक, पर्यटकीय, आर्थिक सबै हिसाबले महत्वपूर्ण यो नगरको वडा नं. ५ बजार क्षेत्र हो । सडक, ढल निकास तथा पूर्वाधार यहाँको मुख्य चासोका विषयहरु हुन् । वडावासीको विकास चाहना र समग्र विकासको बारेमा वडाध्यक्ष डेगराज फुँयलसँग ज्योति पोख्रेलले गरेको कुराकानी :
जनताको सेवा, विकास निर्माणदेखि लिएर वडाका विभिन्न कामहरुमा व्यस्त छु । विभिन्न विकास निर्माणका कामका योजना तथा कार्यान्वयनमा व्यस्त छु ।
विकासको हिसाबले समग्रमा हामी अगाडी नै रहेका छौँ । हाम्रो वडा विकसित वडाअन्तर्गत नै पर्छ । किनकी बजारसँग जोडिएको छ र अहिले विकासको गति हेर्ने हो भने सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको छ ।
वडाको विकासमा कुन पक्षलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
हामीले यो वर्ष एउटा विद्यालय बनाउने योजना छ । हाम्रो वडामा सामुदायिक विद्यालय छैन त्यसैले स्कुल बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यस्तै (चिल्ड्रेन पार्क) बाल उद्द्यान बनाउने कार्य यो वर्षमा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।
यस वडाका मुख्य समस्याहरु के के छन् ?
हाम्रो वडा बजार केन्द्रित वडा हो । यसमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको व्यवस्थित विकास नभएकाले ढल निकासको पनि व्यवस्थापन भइसकेको छैन । त्यसैले बाढीको समस्या रहेको छ । ढल पस्ने, बाढी आउने जस्ता समस्या छन् ।
वडाका काममा कर्मचारीहरुबाट कत्तिको सहयोग मिल्ने गरेको छ ?
सबैको सहकार्यमा रहेर काम गरिन्छ । कर्मचारीहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले खासै समस्या छैन ।
वडावासीहरु के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ?
विशेष गरि वडामा सबै खालका समस्याहरु रहेकै हुन्छन् । विकास निर्माणदेखि लिएर झै–झगडा, छरछिमेक बीचको झगडा, द्वन्द, महिला हिंसा, बाल श्रम शोषणजस्ता समस्या आईरहेका छन् । सुनसरी, मोरङ सिचाई आयोजनाको नहर डिलमा बस्ने सुकुम्बासीहरुको पनि समस्या आउने गरेको छ ।
के भयो भने वडाको विकास चाँडो होला जस्तो लाग्छ ?
यसको लागि समझदारी आवश्यक छ । समझदारीसँगै सहकार्य र सहभागिता पनि हो । सबैको सकारात्मक सहभागिता भयो भने सहजै अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
समग्र वडाको विकासका लागि कसैसँग केही आग्रह गर्नु भएको छ ?
हाम्रो वडामा सम्पूर्ण जनसमुदायसँग जुनसुकै कार्यहरु साझेदारीमा गर्ने गरेका छौँ । सम्पूर्ण विकास निर्माणमा नगरपालिकाको नीतिअनुरुप न्युनतम २० प्रतिशत समुदायले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो वडामा लगभग ५० प्रतिशत जनताकै जनसहभागिता र बाँकी ५० प्रतिशत हाम्रो लगानीमा काम भैरहेको छ । यसमा हामी वडावासीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छौं । साथै आम जनसमुदायलाई विकासको पाटोलाई सकारात्मक रुपले हेरिदिनको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ ।
अन्त्यमा वडावासीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
तपाई मार्फत नै सम्पूर्ण वडाबासीहरुमा यो दसैँ, तिहार र छैठ पर्वको शुभकामना भन्न चाहन्छु र यसै गरि आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको सक्रियताका साथ विकास निर्माणमा सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा चाहन्छु ।